Kavrepati – Page 35 – Kavrepati – Updated News & Latest News
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल श्रावण ३ गते आईतबार इश्वी सन २०२१ जुलाई १८ तारीख असार शुक्लपक्ष नवमी तिथी स्वाती नक्षत्र साध्य योग बालव करण चन्द्रमां तुला राशिमा आनन्दादि योगमा लुम्ब योग राक्षसनाम संवत्सर सुर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु (ज्यो.प.सरोज घिमिरे) मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, …
3 weeks ago	रोचक 0
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए भने कान का’टेर पातमा राख्छु भन्दै अभिव्यक्ति दिने दिपेन्द्र कँडेलले कान का’टेका छन् । केहि दिन अगाडी युटुबमा अन्तरबार्ता दिने क्रममा उनले देउवा प्रधानमन्त्री भए भने कान का’टेर पातमा राख्छु भन्दै बोलेका थिए । आफुलाई पब्लिक ईनोभेटर ईन्जिनियर बताउने कँडेलले आफुले आफ्नो काँन का’ट्छु नभनेको र …
बीबीसीको सन २०२० का संसारका १०० जना प्रभावशाली महिलाहरूको सुचीमा परेकी सपना रोका मगर वास्तवमै एउटि नेपालकी होनहार चेली हुने हुन ।बे’वा’ रिसे श’व व्यवस्थापन गर्दै आएकी म्याग्दीकी १८ वर्षीया सपना रोका मगर ब्रिटिश ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन (बीबीसी)को प्रभावशाली महिलाको सूचिमा परेकी छन् । बीबीसीले मंगलबार सन् २०२० को १०० प्रभावशाली …
मेरी बास्सै’ टेली चलचित्रकी चम्सुरी अर्थात पल्पसा डंगोल यति बेला अस्पताल’मा उपचार गरिरहेकि छिन । कलाकार दिपाश्री निरौलाले आफ्नो फेसबुकमा पोस्ट गर्दै जानकारी दिएकि छिन्। किड्नी मा समस्या आएर टिचिङ अस्पतालको ३०५ नम्बरको बेडमा पल्पसा डंगोललाई भर्ना गरिएको जानकारी दिएकि छिन्। त्यस्तै सबै मिलेर स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न सबैलाइ अनुरोध …
नायिका नम्रता सापकोटा फेसनको दुनियाँमा अगाडि छिन् । कार्यक्रमको प्रकृती अनुसार पहिरन लगाउन उनी सिपालु मानिन्छिन् । डिजाइनरसँगको सहकार्यमा पहिरन रोज्ने भएका कारण पनि उनको पहिरन चर्चामा रहन्छन् । त्यस्तै अहिले नम्रता सापकोटाले आफूलाई विहे नगरीकनै बच्चा जन्माउने सार्वजनिक घोषणा गरेपछी एका एक चर्चामा आएकी छिन । अभिनेत्री नम्रता सापकोटाले …
आमा बितेपछि सेतै कपडामा भ्वाइसको स्टेजमा पुगेर सबैलाई रुवाए ट्याक्सी चालक कर्णले, बिचबाटोमा नै आमाको साथ गुमाएका कर्णले जिते सबैको मन, बिरामी आमा स्वर्गिए भएपछि गरे यस्तो वाचा, हेर्नुहोस् यो मनै रुवाउने भिडियो फेरि कुलमानकै चर्चा, प्राधिकरणमा उनको ‘पुनरागमन’ होला त लोडसेडिङको अन्त्य गरेर ‘स्यावासी’ पाएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व …
3 weeks ago	राजनिति 0
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री भएको आज तीन दिन पुगेको छ । तर छिमेकी मुलुक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अहिलेसम्म उनलाई बधाई किन नदिएको भन्दै अहिले चर्चा सुरु भएको छ । योबीचमा अमेरिकासहित विभिन्न मुलुकले देउवालाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिइसकेका छन् । नेपालमा रहेका आफ्ना कूटनीतिक प्रतिनिधि विजयमोहन …
बुवा ठुलो स्वरले कराउँछन् ।राजु दौडँदै आउँछ, र सोध्छ, “हजुर बुवा…, के होला?” बुवा- “तँलाई थाहा छैन, आज तेरो दिदी रश्मी आउँदै छ भनेर ? हिजो बाट तीन चार पटक भनी सकेँ ! यो चोटि उसले हामीहरू सँगै मिलेर आफ्नो जन्मदिन मनाउने छ….। अब छिटो जा र आफ्नो दिदीलाई ल्याएर …
काठमाडौ । नेपालीमा एउटा भनाई छ मानिसको दिन आयो भने बाकसमा लुकेपनि छोड्दैन । नभन्दै काल कहाँ हुन्छ भन्ने केही थाहा नहुने रहेछ । पाँचथरमा पानी पिउँदा सर्किएर एक एमाले नेताको निधन भएको छ । शनिबार बिहान फिदिम ४ निवासी चन्द्र कुमार तुम्बापोको निधन भएको हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी …